Marka uu Musuqu inaga dhigo kuwa Jaahiliin ah! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Marka uu Musuqu inaga dhigo kuwa Jaahiliin ah!
Muqdisho – Musuq waa lunsasho hanti dadweyne kana dhici kara goob si gaar ah loo leeyahay ama rug danta bulshada loogu adeego. Waxaa lagu tusaaleeyaa laaluush, dhagar, wax is-daba-marin iyo qaraabo-kiil intaba.
Previous: Ronaldo oo doonaya in uu ka tago Real Madrid.